RASMI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Yurub Ee UEFA Oo Soo Saaray Shaxda Kooxdii Wareega Shanaad Ee Champions League ugu Fiicnayd-Miyay Kooxdaada Ciyaartoy Ugu Jiraan? - Gool24.Net
RASMI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Yurub Ee UEFA Oo Soo Saaray Shaxda Kooxdii Wareega Shanaad Ee Champions League ugu Fiicnayd-Miyay Kooxdaada Ciyaartoy Ugu Jiraan?
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa soo saaray shaxda kooxdii wareegii shanaad ee UEFA Champions League ugu fiicnayd. Waxaa xalay iyo habeen hore la ciyaaray kulamadii wareega shanaad ee Champions League waxaana shaxdan laga soo xulay ciyaartoydii ugu bandhiga fiicnayd.
UEFA ayaa shaxda kooxda todobaadka ee Champions league ku salaysa ciyaartoyda dhibcaha ugu badan looga helo Fantasy Football waxaana boos kasta loo eegaa xidiga dhibcaha ugu badan loogu guulaysto.
Goolhayaha kooxda Real Madrid ee Courtois ayaa loo doortay goolhayihii ugu fiicnaa kulamadii wareegii shanaad ee Champions league wuxuuna ku jiraa shaxda kooxda Champions League ee kulamadii shanaad ugu fiicnayd kadib markii Roma ke joojiyay fursado ay goolal ku keensan kareen kulankii ay Madrid guusha soo gaadhay.
Afarta difaaca ah ee shaxda kooxda todobaadka Champions League ugu fiican waxaa kuwada jira Kimmich oo Bayern Munich ka tirsan,Lukas Hejda oo Victoria Plzen u ciyaara, Militao oo FC Porto ka tirsan iyo waliba difaaca Shakhtar ee Simaily.
Saddexda khadka dhexe ee shaxda kooxda todobaadka shanaad ee Champions Leaugue ugu fiicnayd waxaa ku soo wada baxay Hamsik oo Napoli ka tirsan, xidiga kooxda Skhatar ee Taison iyo waliba Arjen Robben oo wacdaro ka dhigay kulankii Bayern Munich ku xasuuqday Benfica.
Ugu danbayn saddexda weerarka ah ee shaxda kooxda todobaadka UEFA Champions League waxaa ku soo wada baxay Robert Lewandowski, Dries Mertens iyo Cornet oo min laba gool ka soo dhaliyay kulamadii todobaadkan ee Champions League.
Lewandwoski ayaa Bayern Munich laba gool uga dhaliyay kulankii Benfica, Cornet ayaa isna laba gool shabaqa kaga soo taabtay Man City kulankii Lyon halka Mertens uu isna laba gool Napoli uga dhaliyay kulankii Red Star Belgrade.
Haddaba halkan si buuxda ugaga bog Shaxda Kooxdii Todobaadkii Shanaad Ee Champions League Ugu Fiicnayd Ee Ay UEFA Soo Saartay:
Haddaba akhriste miyaad filaysaa in ay shaxdani tahay shaxdii ugu fiicnayd ee kulamadii shanaad ee Champions League? Miyay jiraan ciyaartoy bandhig fiican sameeyay oo aan shaxdan ka soo muuqan oo u qalmay in lagu soo daro?
Haa weyjiran hebeyn hore Neymar ayaa wacdaro kadhigay chompoins leugue?